चढ्ने होईन त जहाज, गाडी भाडाभन्दा पनि सस्तो भयो हवाई यात्रा, अब कहाँ जान कति खर्च लाग्छ ? — Imandarmedia.com
चढ्ने होईन त जहाज, गाडी भाडाभन्दा पनि सस्तो भयो हवाई यात्रा, अब कहाँ जान कति खर्च लाग्छ ?
कमलकुमार बस्नेत, काठमाडौं । काठमाडौंदेखि पोखरा जानका लागि सामान्य माइक्रोमा ५ सय रुपैयाँ लाग्छ । झण्डै ५ घण्टाको यात्रामा खानारखाजालाई हिसाब गर्ने हो भने ७ सय पुग्न सक्छ । सोही रुटमा आरामदायी यात्रा गर्ने हो भने ५ गुणा महंगो पर्छ । काठमाडौं-पोखराको सडक रुटमा पोखरा जगदम्बा ट्राभल्सले लग्जरी बस सञ्चालन गर्छ ।
जसमा नेपाली नागरिकका लागि २२ सय रुपैयाँ र विदेशीलाई २७ सय रुपैयाँ लिएर सेवा दिइरहेको छ । जसमा चिया, कफी र लञ्च पनि समावेश गरिएको हुन्छ । जगदम्बाले सुविधायुक्त र आरामदायी सेवा दिइरहेको समयमा विलासी मानिने हवाई यात्रा भने त्योभन्दा सस्तो देखिएको छ ।
काठमाडौं-पोखराको सडक रुटमा सञ्चालनमा रहेको लग्जरी बस । जसले नेपाली नागरिकका लागि २२ सय रुपैयाँ र विदेशीलाई २७ सय रुपैयाँ लिएर सेवा दिइरहेको छ । अहिले विमान कम्पनीहरुले काठमाडौं(पोखराका लागि एकतर्फी यात्रा जम्मा १७ सय रुपैयाँमा उडान गरिरहेका छन् । जुन लग्जरी बसको तुलनामा ५ सय रुपैयाँ सस्तो हो । एयरलाइन्सको संख्या र उडानसँगै बढेसँगै यात्रु आकर्षित गर्नका लागि हवाई कम्पनीहरुले सस्तो भाडामा यात्रु उडाउन थालेका हुन् ।
राजधानीदेखि नजिक पर्ने पर्यटकीय नगरी पोखरामा एकतर्फी भाडा न्यूनतम १७०० रुपैयाँमा विमानहरुले यात्रु बोकिरहेका छन् । भने यो रुटमा अधिकतम भाडा ५०५० रुपैयाँ छ । ५०५० रुपैयाँ अधिकतम भाडा भएको अवस्थामा १७०० रुपैयाँ निकै न्यूनतमभन्दा पनि सस्तो भाडा दर हो ।त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा रहेको बोर्डिङ्ग पास लिने स्थान ।भैरहवाका लागि अहिले विमानहरुले २५०० रुपैयाँसम्ममा उडान गरिरहेका छन् । जबकी अधिकतम भाडा ६२०० रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् । त्यस्तै, विराटनगरका लागि अहिले विमान कम्पनीहरुल २६०० रुपैयाँसम्ममा टिकट बिक्री गरेका छन् भने अधिकतम ७६०० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
धनगढीमा १२७०० रुपैयाँसम्म अधिकतम मूल्यमा टिकट बिक्री गर्ने विमान कम्पनीहरुले ५५०० रुपैयाँसम्ममा समेत टिकट बिक्री गरिरहेका छन् । त्यसतै, नेपालगञ्जको हकमा १० हजार रुपैयाँसम्म अधिकतम मूल्यमा टिकट बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले अहिले ३३०० रुपैयाँसम्मा पनि यात्रु बोकिरहेका छन् । राजधानीदेखि नजिकै रहेको भरतपुरका लागि विमान कम्पनीहरुले सस्तो शुल्कमा २९५० रुपैयाँसम्ममा टिकट बिक्री गरिरहेका छन भने बढीमा ३६५० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
पोखराको न्यूनतम भाडा रु १ हजार सात सय हो । माथिको तस्विरमा कमा राख्दा १ र ७ को बिचमा हुनुपर्नेमा ७ र ० को बिचमा परेछ । अंक पढ्दा १७ सय देखिनुपर्नेमा १७ हजार जस्तो भान हुन सक्छ । त्यस्तै, सिमरामा ३१५० रुपैयाँ, भद्रपुरमा ३००० रुपैयाँ र जनकपुरमा २५०० रुपैयाँमा विमान कम्पनीहरुले टिकट बिक्री गरिरहेका छन् । यो समाचार हामिले क्लिकमाण्डू डटकमबाट साभार गरेका हौं ।